I-Villa Manzoni - indawo yokuhlala yaseAllume
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguLucas Sourdille
I-Allume apartmet lolona khetho lufanelekileyo kwabo bafuna ukuphila ixesha lokwenyani leGiglian. Yindawo ekhuselekileyo, ezolileyo, egcinwe kakuhle, efudumeleyo ejonge olona lwandle luhle kwaye lucocekile lwase-Italiya, ukusuka apho ungonwabela ukutshona kwelanga okungaqhelekanga.
Ilungele izibini okanye iintsapho ezijonge ukuzola, indalo kunye nokuphumla.
Umama, sisi wam kunye nam sikwisandla sakho kuzo zonke iimfuno, injongo yethu kukukwenza uzive usekhaya.
Ukulungiswa nje, igumbi liqulunqwe ngamanqanaba amabini: kumgangatho ophezulu ubonelela ngegumbi eliphindwe kabini; igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elinye elinekhitshi apho ibekwe ibhedi entsha netofotofo yesofa ebonelelwe kumgangatho osezantsi.
Umphandle ulungiselelwe ukuba ube nesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa kwaye ubonelela ngeshawari yangaphandle.
Ukusuka kwindlu yakho unokwenza yonke into ngeenyawo: umzuzu o-1 ukusuka elunxwemeni, imizuzu emi-3 ukusuka elunxwemeni kunye neendlela zokuhamba, imizuzu emi-5 ukusuka kwiziko elincinci apho uya kufumana imivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezithengisa ukutya.
4.65 ·Izimvo eziyi-69
4.65 · Izimvo eziyi-69
Indawo yakho yokuhlala ikwiGiglio Campese, kumantla-mpuma wesiqithi, ilungele ukuvezwa kwelanga ngokobuninzi bayo ukusukela ehlotyeni ukutshona kwelanga malunga nentsimbi yesi-9 ebusuku.
Ukusuka apho ungonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo eCampese bay, ujonge iziqithi ezininzi elundini njengeMonte Cristo, Elba kunye neCorsica!
IVilla Manzoni ikwimpuma yeGiglio Campese, ehlala ikhanyiswa lilanga.
Ukusuka kwindlu yakho uya kuba amanyathelo ambalwa ukusuka kuyo nayiphi na indawo enomdla yeGiglio Campese. Uya kuhamba ngeenyawo: umzuzu o-1 ukusuka elunxwemeni, imizuzu emi-3 ukusuka elunxwemeni kunye neendlela zokuhamba, imizuzu emi-5 ukusuka kwiziko elincinci apho uya kufumana imivalo, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezithengisa ukutya.
Umbuki zindwendwe ngu- Lucas Sourdille
Uyakwamkelwa ngezandla ezishushu ngumama, umnini weVilla Manzoni, owazi le ndawo kangangeminyaka engama-54 kwaye uhlala khona unyaka wonke. Uhlala ekulungele kwaye eluncedo ukukunika lonke ulwazi ukuze akwenze uphile amava e-Giglian yokwenyani!
Uyakwamkelwa ngezandla ezishushu ngumama, umnini weVilla Manzoni, owazi le ndawo kangangeminyaka engama-54 kwaye uhlala khona unyaka wonke. Uhlala ekulungele kwaye eluncedo ukukuni…
ULucas Sourdille yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Giglio Campese